အဝါရောင် Tpu ကားဆေးသုတ်ခြင်းကာကွယ်ရေးရုပ်ရှင် ကား၏ KPAL PPF-ကုမ္ပဏီ သတင်း-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Auto Paint ကာကွယ်ရေးရုပ်ရှင်
အော်တို Window Tint ရုပ်ရှင်
အဆောက်အ ဦး / လူနေအိမ်ရုပ်ရှင်
Car Vinyl Film Wrap
အဝါရောင် Tpu ကားဆေးသုတ်ခြင်းကာကွယ်ရေးရုပ်ရှင်ကား KPAL PPF
အဝါရောင် Tpu ကားဆေးသုတ်ခြင်းကာကွယ်ရေးရုပ်ရှင် Car Of KPAL PPF
လူများစွာသည် ကားများကိုကာကွယ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရုပ်ရှင်များကို ကားများပေါ်တွင် တင်ကြသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အဝါရောင်ဖလင်သည် ကား၏အသွင်အပြင်ကို များစွာလျော့ကျစေသည်။ ဒါက ဘာကြောင့်လဲ။ ရှိသလား ရုပ်ရှင် အဝါရောင်မပြောင်းဘူးလား။
ထိုနည်းလည်းကောင်း, ဘာဖြစ်သလဲ PPF? It ကားဆေးသုတ်ခြင်းအတွက် ရိုးရှင်းသော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့် အကာအကွယ်ဖလင်ဖြစ်သည့် polyurethane ဖလင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကားဆေးဟုလည်း ခေါ်သည်။ PPF. ထုတ်ကုန်တွင် မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှု၊ ပွန်းပဲ့မှုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ အဝါရောင်ဆန့်ကျင်မှု၊ တပ်ဆင်ပြီးနောက် လေထုနှင့် ကားဆေးမှုတ်မျက်နှာပြင်ကို ခွဲထုတ်နိုင်သည်၊ အက်ဆစ်မိုးရွာခြင်း၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်၊ ခြစ်ရာများကို ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် အက်ဆစ်မိုးရွာခြင်း၊ ဒါပေါ်မှာ။ ဒါဆို အဝါရောင်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိလို့လား။ ရုပ်ရှင် အခု အဝါရောင်ပြောင်းသွားပြီလား။ ဤသည်၏ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်. PPF အစောပိုင်းတွင်ပေါ်လာသော polyvinyl chloride ဖြစ်သည့် PVC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်စျေးပေါသည်၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးပိုမိုခက်ခဲသည်၊ သို့သော်၎င်း၏အားနည်းချက်မှာအဝါရောင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၏အသွင်အပြင် အရည်အသွေးညံ့ခြင်းကြောင့် အဝါရောင်ဖြစ်နိုင်သည်။.
အခု ပိုကောင်းတယ်။ PPF is ယေဘူယျအားဖြင့် TPU ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အတော်လေးပြောရလျှင် TPU ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ "စီးပွားရေးစွမ်းရည်" က ကောင်းတယ်၊နှင့် ၎င်း၏ အမျိုးမျိုးသောစွမ်းရည်များသည် အဆင့်သစ်တစ်ခုအထိဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အဝါရောင်ကို ဆန့်ကျင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမှာ များစွာပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ဥပမာ, KPAL ၏ K စီးရီးထုတ်ကုန်များ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ သင့်ကားပေါ်တွင် သုတ်ဆေးအကာအကွယ်ဖလင်ကို တင်ထားသောကြောင့် သင့်ကား၏အသွင်အပြင်သည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှိပြီး အလွယ်တကူ ပျက်စီးသွားမည်မဟုတ်ကြောင်း သင်မျှော်လင့်ပါသည်။
KPAL သုတ်ဆေးကာကွယ်သည့်ရုပ်ရှင်သည် သဘာဝရော်ဘာပေါ်လီမာ TPU သွန်းလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ခံပြီး နိုင်ငံအသီးသီး၏ ရာသီဥတုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အရ မတူညီသော ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော အပေါ်ယံအလွှာများကို ဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ ၎င်းသည် ပြင်းထန်သော ရိုက်ခတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ထိုးဖေါက်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် ခြစ်ရာကို ဆန့်ကျင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ ပါဝင်သည်။ တည်ငြိမ်သော ခြစ်ရာများကို ပြုပြင်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်၊ အားကောင်းသော ရေခံနိုင်ရည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ချေးခံနိုင်ရည်၊ စွန်းထင်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း နှင့် အဝါရောင်ဆန့်ကျင်မှု အားကောင်းသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
သုတ်ဆေးကာကွယ်မှုရုပ်ရှင်အကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ တရားဝင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကို ထည့်သွင်းရန် ကျေးဇူးပြု၍ နှိပ်ပါ။www.kpalautomotive.com
#paintprotectionfilm #high qualitytpuppfffilm #yellowingresistance #filmmanufacture #KPALtpuppf
မူလစာမ်က္ႏွာ (Home) ထုတ်ကုန်များ KPAL ဝန်ဆောင်မှု သတင်း ဆက္သြယ္ရန္
ထည့်ပါ - အခန်း ၅၁၆၊ ၅ / F၊ အမှတ် ၁ အဆောက်အ ဦး၊ ၈၁၈ Jinyuan လမ်း၊ Yinzhou၊ Ningbo, Zhejiang, China ။
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-574-89257752
ကို EMAIL: cloud@cloudsenterprise.com